स्व–सचेतना मानिसको जागृत अवस्था हो | eAdarsha.com
कोरोनाको दोस्रो लहरले नेपालजस्तो थोरै जनसंख्या भएको देशमा यो अवस्था सिर्जना हुनुलाई सामान्य रूपमा लिइनु हुन्न । अझै पनि यो प्रतिकूलता र भयबाट जोगिनका लागि स्व–सचेतनालाई पहिलो औषधीका रूपमा प्रयोग गर्नु जरूरी छ ।
सचेत व्यक्ति परिस्थितिलाई दोष दिँदैन र अरूबाट अपेक्षा पनि गर्दैन । तर, ऊ हरेक परिस्थितिमा सचेत भने रहन्छ । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि जीवनशैली व्यवस्थापनको कला जान्नु सचेत र विवेकशील व्यक्तिको गुण हो ।
डर र त्रासले समस्या समाधान हुने होइन । आफ्नो स्वास्थ्य, वरपरको वातावरण आदि कुरालाई ख्याल गर्दै संयमित र संवेदनशील बन्नु आफैंमा एउटा अनुशासन पनि हो । महामारीको अवस्था भयानक भएर निषेधाज्ञा जारी भएपछि मात्र होइन, आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था र जीवनशैलीबारेमा सदैव सचेत रहनु जरूरी छ । घर बाहिर हिँडडुल गर्नमा रोक लागेको भए पनि घरभित्र बसेर आफूलाई मानसिक रूपमा शान्त र स्वस्थ अनि शारीरिक रूपमा पनि स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्नमा स्वयं जागरुक हुनुको विकल्प छैन । अस्पतालमा कोरोनाको बिरामीले ठाउँ नपाउने अवस्थाको चिन्तामात्र होइन, यो समयमा अरू अस्वस्थताले हामी अस्पताल जाने स्थिति नआओस् यसमा सचेत हुनु जरूरी छ ।
हाम्रो खानपान, सोचाइ र जीवनशैलीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई निर्धारण गर्दछ । बाहिर निस्कने बानी भएकाहरुमध्ये धेरैजसोको बानी घरमा बस्दा शारीरिक अभ्यास नगर्ने, योग, ध्यान नगर्ने, यसो बारी बगैंचामा काम पनि नगर्ने केवल खाने र टिभी हेरेर बस्ने गरेको पाइन्छ । यसो हुँदा आलस्य बढ्ने, शरीरमा मोटोपना बढ्नेमात्र नभई उच्च रक्तचाप, चिनी रोग बढ्ने मौका पनि यही हुन सक्छ ।
खानाको असन्तुलन र मांसाहारयुक्त खाना बढी भयो भने पेटको गडबडी तथा अन्य रोगले नसताउला भन्न सकिन्नँ । त्यसैले संक्रमणबाट बच्नु त छँदै छ आफ्नै दैनिकी र जीवनशैली पनि संयम, धैर्यतापूर्ण र विवेकपूर्ण हुनु जरूरी छ ।
जसलाई कोरोनाको असर परिसकेको छ, उसले चिकित्सकीय सल्लाहअनुसार संयमित हुनु जरूरी छ नै, जसलाई अझै कोरोना असरले छोएको छैन, उसले केही संयमता र विवेकको प्रयोग गर्ने हो भने महामारीको समयमा मात्र होइन अरु समयमा पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था आउँदैन । संयमताका केही सूत्रहरू जानिराखौं र व्यावहारिक प्रयोग गरौं –
योग नै नसिकेकाले के गर्ने त ? चिन्ता गर्नुपर्दैन । टिभीमा, मोबाइलमा, रेडियोमा गीत त प्रायको बजेको हुन्छ र बजाउन सकिन्छ । संगीतको लयमा शरीरलाई हल्काफुल्का पार्दै करिब २०–३० मिनेट नृत्य गर्नु आफैंमा सशक्त शारीरिक अभ्यास हुन सक्छ ।
घरको आँगनमा, घर वरिपरि, कौसीमा बिस्तारै हिँड्ने अर्काे उपाय हो । बारी, बगैँचामा काम गर्ने, झारपात उखेल्ने, बिरुवामा पानी दिने यस्तै अनेक सानातिना कामले पनि शरीरलाई व्यायाम मिल्छ । शरीर स्फूर्त हुन्छ । शरीरमा स्वासको लयबद्धता मिल्छ र अक्सिजनको मात्रा पनि पर्याप्त मिल्छ ।
म निश्चिन्त खुसी र निर्भय प्राणी हुँ, नराम्रो हुँदैन, रोगले छुँदैन, भन्ने भावना जागृत गर्नसके समस्याले चिन्तामा लैजाँदैन
जब श्वास–प्रश्वास सहज हुन्छ, तब मन पनि स्थिर, शान्त र खुसी हुन्छ । यो महामारीको समयमा सबैभन्दा पहिले आत्तिने भनेकै मन हो । मन आत्तिनासाथ स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि असहजता भएको, शरीरमा अक्सिजन कम भएजस्तो, रोगका सबै लक्षण आफैंलाई देखिएजस्तो महसुस हुन्छ । त्यसैले शारीरिक व्यायाम मनलाई स्थिर राख्ने, रक्तसञ्चार सुचारू राख्ने र स्वास–प्रस्वासलाई सहज राख्ने माध्यम हो ।
शरीरलाई आवश्यक पौष्टिक तत्व प्राप्त हुने भोजन नै सन्तुलित र पूर्ण भोजन हो । हामी खाना खान्छौं तर त्यसमा स्वादमात्र हेर्छाै या पौष्टिकता पनि त्यो महत्वपूर्ण छ । घर बसेको समयमा र काम नभएको समयमा पटक–पटक खाइरहने हो ? कति खाने, कसरी खाने र खाएको खाना पाच्य हुन कति समय लाग्छ आदि कला पनि सँगै जान्नुपर्ने हुन्छ ।
भिटामिन, प्रोटिन, कार्बाेहाइड्रेड, क्याल्सियम जस्ता आवश्यक तत्व प्राप्त हुने गरी फलफूल, सागसब्जी, अन्न र मासु एवं दुग्ध पदार्थको पनि सन्तुलन मिल्नुपर्ने हुन्छ । उमेर अनुसार पनि हाम्रो भोजनको मात्रा निर्धारित हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । हामी सोचौं, हाम्रो उमेर बढ्दै जाँदा हाम्रो शारीरिक अभ्यास कम हुँदै जाँदा पनि हामी त्यति नै मात्रामा भोजन ग्रहण गर्छाैै या परिवर्तन भएको छ ?
कुनै पनि घटना या परिस्थितिले हाम्रो विचारमा उथलपुथल ल्याउँछ र त्यसले कुनै सिर्जनाको प्रादुर्भाव गर्दछ । सकारात्मक घटना छ भने सकारात्मक कार्यको थालनी हुन्छ । नकारात्मक घटनाले असर गरेको छ भने व्यक्तिमा हानिकारक अभ्यासको आदत पनि बस्न सक्छ ।
आत्मबलजत्तिको आन्तरिक ऊजा अरु केही हुँदै हुँदैन । आन्तरिक ऊर्जाशक्तिले आफूलाई भयमुक्त, सफल र आनन्दित छु भनेर सोच्ने बानी बसाल्नुपर्छ । आफ्नो डाक्टर आफैं, आफ्नो प्रेरणाको स्रोत आफैं, आफ्नो भरोसा आफैं बन्नुपर्ने यो अवस्थामा आत्मबल कमजोर हुन दिनुहुन्न । आत्मबलले विचार सकारात्मक बनाउँछ ।
भावबाट नै सबै समस्या समाधान हुन्छन् भनेर खप्तड बाबाले आफ्नो विचार विज्ञानमा उल्लेख गर्नुहुन्छ, पूर्ण विश्वास र नियमपूर्वक यसको अभ्यासलाई जारी राख्नेले आफूमात्र होइन, अरूलाई समेत चिन्तारहित बनाउन सक्छ ।